Posted on September 18, 2011 by Babukrishna	महाप्रसाद अधिकारी
कमजोर कमजोर संस्था ख र ग वर्गमा अझै तरलता स्थिति सहज देखिदैन । यसको समाधान कसरी सम्भव होला ?
एक तह भन्दा माथि स्तरोन्नति गर्न नपाउने निर्देशन आएपछि कतिपय वित्तीय संस्था स्तरोन्नति प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् । त्यस्तै एक तह माथि गर्नेहरुको सवालमा पनि राष्ट्र बैंकले सोही निर्देशनमार्फत निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । स्तरोन्नति हुन निश्चित काम गरेर निश्चित दायित्व भइसकेको हुनुपर्ने भनेको छ । यसको मतलव माथिल्लो तहको काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिसकेको हुनुपर्ने बताएको छ । त्यस्तो क्ष्ँमता भन्नाले मानवीय स्रँेत, पुँजीको आकार, निक्षेपको आकार, ऋणको आकार, ग्रँहक संख्या, शाखा संख्याको हिसाबले पनि माथिल्लो स्तरको छेउछाउ पुगेको हुुनुपर्ने हो । सो निर्देशनमार्फत हामीले ऐनमा भएको माथिल्लो तहमा स्तरोन्नति हुने प्रावधानलाई थप सरलीकृत गरेका छौं । यसले गर्दा जो पायो त्यही तुरुन्त स्तरोन्नति गरेर आउने कुरा चाहि भएन । यो निर्देशन ल्याउने सिलसिलाले पनि हामीलाई अलिकति समय लगायो । यो निर्देशन आइसकेपछि हामी निवेदनको प्रशोधन गर्न लाग्यौं । निवेदन परेकाहरुको विशेष निरिक्षण गरी सुशासनको अवस्था कस्तो छ, मानवीय साधनको अवस्था कस्तो छ लगायतको जाँच ग¥यौं । यस्तो जाँच गर्दा कुनै कुनै संस्थाहरु स्वतः अयोग्य देखिए । कुनै कुनै संस्था योग्य देखिदैमा स्वीकृति दिइ हाल्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता छैन । योग्य देखिएकाहरुको अझ अध्ययन गर्ने कार्य चाँहि पाइपलाइनमा छ । Share this:EmailTweetPrintShare on TumblrLike this:Like Loading...
Filed under: Bank and Finance, Interview « ग्रामीण विकास बैंक मर्जरतिर पोहोर साल भन्दा ८ अर्ब बढी नयाँ नोट »